राजकुमार चेपाङको परिवारलाई बल्ल राहत | मगरात समाचार
राजकुमार चेपाङको परिवारलाई बल्ल राहत
दोषी भनिएका सैनिकलाई पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढे पनि निकुञ्जले पीडित परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको थियो । बिहीबार सहमतिअनुसारको बाँकी ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो ।
चितवन — चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको आरोपमा नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएका बेला कुटपिटमा परेर मृत्यु भएका राजकुमार चेपाङको परिवारलाई निकुञ्जले बिहीबार ६ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको छ । गएको साउन १ मा राप्ती नगरपालिका–२ पिप्ले मिलनटोलका २४ वर्षीय राजकुमारसहित ७ जना स्थानीय निकुञ्ज छिरेका थिए ।
लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिले दिएको राहत रकम बुझ्दै सेनाको कुटाइबाट मृत्यु भएको भनिएका चितवन पिप्लेका राजकुमार चेपाङकी श्रीमती ।
राजकुमारको मृत्युपछि दोषीलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत माग गर्दै परिवार र स्थानीयले आन्दोलन गरेका थिए । दोषी भनिएका सैनिकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि पीडित परिवारले सहमतिअनुसारको राहत रकम पाउन सकेका थिएनन् । चितवन प्रशासनमा निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख, सेनाको गणका प्रमुख र पीडित पक्षबीच साउन १६ मा भएको वार्तामा राजकुमारको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि साउन १८ मा मात्रै राजकुमारको अन्त्येष्टि गरिएको थियो ।
सहमतिलगत्तै राप्ती नगरपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ राहत दिए पनि निकुञ्जले एक लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको थियो । निकुञ्जले सहमतिको साढे ४ महिनापछि मात्रै बाँकी रकम दिएको हो । निकुञ्ज कार्यालयबाट पछि सोधभर्ना हुने गरी लोथर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको आन्तरिक स्रोतबाट राजकुमारको परिवारलाई बिहीबार ६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको समिति अध्यक्ष मानबहादुर स्याङ्बोले बताए । मृतककी श्रीमती रेपिका प्रजा चेपाङका नाममा ६ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक प्राप्त भएको चेपाङ अगुवा गोविन्दराम चेपाङले जानकारी दिए ।
के–के छन् अरू सहमति ?
प्रशासनमा भएको वार्तामा राजकुमारकी छोरीलाई विद्यालय जाने उमेर नहुँदासम्म भरणपोषण र विद्यालय जान थालेपछि १२ कक्षासम्म पढाउन चितवन निकुञ्जले सहयोग गर्नेसमेत सहमति भएको थियो । राजकुमारकी छोरीको उमेर अहिले अढाई वर्ष छ ।
त्यसैगरी, राजकुमारको परिवार बस्ने घर बनाउन निकुञ्जले सामग्री उपलब्ध गराउने र मध्यवर्ती समितिले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । राजकुमारको परिवार पाँच धुर ऐलानी जग्गामा बनेको सानो घरमा बस्दै आएको थियो । घटनापछि राप्ती उपप्रमुख इमानसिंह लामाले राजकुमारको घर बनाइदिएका छन् । अन्य सहमति कार्यान्वयन नभएकाले त्यसका लागि आफूहरू निरन्तर लागि पर्ने चेपाङ अगुवा गोविन्दराम बताउँछन् ।
कहाँ पुग्यो कारबाही प्रक्रिया ?
छोराको मृत्युपछि राजकुमारका बाबु विष्णुलाल चेपाङले कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै चितवन प्रहरी कार्यालयमा साउन ९ मा उजुरी दिएका थिए । उनले भदौ २५ मा छोरालाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिको नामै किटेर अर्को जाहेरी दिए । किटानी जाहेरीमा बटुक दल गणको अप्रेसनल अन्डर कमान्ड सिद्धिबक्स गणको प्यारीधाप गुल्मको लिगलिग पोस्टमा कार्यरत हुद्दा ४० वर्षीय चिरणकुमार बुढाले कुटपिट गरेको उल्लेख छ । राजकुमारको पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा परीक्षण रिपोर्ट र रगत परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मात्रै प्रहरीले आरोपित बुढालाई समाएको थियो ।
बर्दिया गेरुवा–५ घर भएका बुढा किटानी जाहेरी परेको १० दिनपछि (असोज ४ मा) पक्राउ परेका थिए । उनलाई जन्मकैद माग गरी चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दयार भएको छ । जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीले असोज २७ मा बुढालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भरतपुर कारागार पठाउने आदेश दिएका थिए । हाल यो मुद्दा पेसीमा चढेको छ र सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १२ अन्तर्गत ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १७८ को उपदफा १ बमोजिम अपराध भएको हुँदा उपदफा २ बमोजिमको सजाय माग गरेर मुद्दा दायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कसैले कुनै काम गर्दा मानिसको ज्यान जान सक्छ भन्ने जानी–जानी त्यस्तो काम गर्न नहुने उपदफा १ मा उल्लेख छ, जसअनुसार अपराध भए कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था उपदफा २ मा छ ।
प्रकाशित : पुस ४, २०७७ ११:१०
अघिल्लो लेखमादाहाललाई भेट्न खुमलटार जाँदै प्रधानमन्त्री ओली
अर्को लेखमासामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकलाई नि:शुल्क इन्टरनेट